We Fight We Win. -- " More than Media ": NLD အလံ/တံဆိပ်ကို ကန့်ကွက်သူ ပေါ်လာပြီ
ဒါကတော့ ကိုရဲထွန်းတို့ပါတီရဲ့ အလံ နဲ့ တံဆိပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ( မူရင်း - ဧရာဝတီ)
တိုင်းပြည်ပျက်အောင် ပြည်တွင်က ဖေါက်လိုက် ပြည်ပက ဖေါက်လိုက်နဲ မမေားကြသေဘူးလား။ ဒုတ္ခရောက်နေတဲ့ မြန်မာလူမျိုးအားလုံးကို ညာတာတယ် ထောက်ထားတယ်ဆိုရင် မြန်မာလူမျိုးတွေ အားလုံးအပေါ်မှာ ဖျက်လိုဖျက်စည်း ဖြစ်နေတယ် လုပ်ရပ်တွေကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ သူတော်ကောင်လို့ကို ကိုယ် ကို သတ်မှတ်ခဲ့ရင်ပါ။ သူယုတ်မားတွေ
ဆိုရင်တော့ ဆက်လုပ်ပေါ့။ ကိုမိုးသီးကို အကိုကြီးတစ်ယောက်လို ခင်ပါတယ်။ ဒီဘလောက်ခ် အစကတင်ထားတဲ့ ဂဠုာန်တွေ ရိုတ်တဲ့ပွဲးထဲးက ကိုမိုးသီးလိုပဲ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေကို ယုတ်မာတဲ လုပ်ရပ်ကို အားပေးနေတဲ့ ကိုမိုးသီးအဖြစ် မဖြစ်စေလိုပါဘူး။ တစ်နေ့ကိုမိုးသီး မြန်မာပြည်ထဲး
ပြန်ရောက်လာပြီး နိင်ငံရေးပါတီထောင် ရွေးကောက်ပွဲး ၀င်အရွေးခံနိင်တဲ့ တစ်နေကြရင် ကျွှန်တော် အနေနဲ
ထောက်ခံမဲ တစ်မဲးပေးမိမှာပါ။ ဒီလိုဖြစ်ဖို့ က ကိုမိုးသီး
အနေနဲ ယနေအချိန်ကထဲးက မြန်မာပြည်သူပြည်သား
တွေအတွက် သူတော်ကောင်း အလုပ်တွေနဲ သက်သေ
ဥပမာ- မေ့နေမလားမသိ့ဘူး မနှစ်က မြ၀တီမှာ စစ်ဖြစ်တော့ စစ်ကြောင့်ပြေးလာရတဲ့ ခလေးတွေ အဖိုးအိုတွေကို ကိုယ်တိုင် ထမ်းပိုးကူညီပေးနေခဲ့တဲ့ သူတော်ကောင်းစိတ်ဓါတ်တွေပါ။ ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေက ကိုမိုးသီးကို လူတွေ ချစ်ကြပါတယ်။ အလာကားနေရင် သဘေားထားသေးသိပ်ပြီး ကိုယ်ထက်သာ မနာလို အရက်သမား ဖဲးသမား ကြာကူလီ ကိုလူမျိုးအချင်းချင်း ငိုစား ရည်စား ချိန်းချောက်စားနေတဲ့ သူယုတ်မာတွေရဲ
မြှောက်ပင်သွေးဆောင်တာကို သာယာမနေပါနဲ မလုပ်ပါနဲ တိုင်ပြည် ထပ်ပျက်အောင်။အရင်က ကိုမိုးသီး
ရေးပြခဲ့တယ် မေ့နေပြီလား ဒီမိုကရေစီဆိုတာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆဲရေးတိုင်ထွာခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာ။ ဒါပေမဲ့ ကျွှန်တော်တို့ က မဆဲးပါဘူး။ မိုက်တယ် ဆိုတာ လွယ်ပါတယ်။ လိမ္မာဖို့သူတော်ကောင်စိတ်ထားပြီ
မေတ္တာစိတ်ရှိဖို့ က တော်တော်မလွယ်တဲ့ အလုပ်ပါ။
လေ့ကျင့်ကြည့်ပါ။ ကိုမိုးသီးနဲ တစ်ဖွဲ့ လုံး အမှန်တကယ် ဒီမိုကရေစီလမ်းကိုလျှောက်နေကြတယ် ဆိုရင် ဒီစာကို တင်ပေးပါ။ တစ်နေ မြန်မာပြည်ရဲ အားကိုရတဲ့
ခေါင်းဆောင်ကြီး ကိုမိုးသီး ဖြစ်ပါစေလို မျှော်လင်နေပါမယ်။
Now I am ashamed of myself as Myanmar. When is the last time we united together? Never.
We fight we win group looks very happy to against DASSk. Remember! I always respect KMT for what you did in 8888. But time has changed so many things and situation in Burma. I don't really know what you guys are doing/helping for the political prisoners in burma. I am very happy with what DASSK is doing now. you can't do like her. Be supportive and prepare for North AB Case. Remember again I always respect you. Please don' kill me.
to all 88 gegeration ladies and gentlemen,
personally i really respect you but what is the best way for our country now?
i do believe so, DASSK's leadership only can reach our democracy goal for now.
i always remember one word since my childhood..... UNITY IS STRENGTH.
my question is you guys want back THAT FLAG or DEMOCRACY OR BETTER FUTURE FOR OUR PEOPLE, ESPECIALLY FOR OUR YOUNGER GENERATIONS ?????????????????
how long should we wait the unity and democracy??????
i'm sorry for if my comment is not comfortable or rude for you.